Njalo ngonyaka eRussia liba bajabule kakhudlwana abanikazi iPhone. Kule ndaba, efuna ukuvikela ulwazi lwabo lomuntu siqu kusukela emehlweni prying Apple abasebenzisi umkhiqizo uyazibuza kanjani ufake iphasiwedi ku-iPhone lokusebenza noma yokutakula irekhodi ifolda izithombe.
Izindlela ukuthi ukubeka iphasiwedi ku-iPhone isicelo efakwe ocingweni lwakho, kukhona eziningana. Nokho, uma idivayisi Kulula kakhulu ukusebenzisa. Omunye ambalwa zako asikho isidingo ukufaka isofthiwe eyengeziwe, ukuvumela ukuba ugcine isikhala esithe xaxa.
Ukuze usethe iphasiwedi ngendlela ejwayelekile kufanele uye "Izilungiselelo" imenyu lapho kufanele ukhethe "Okujwayelekile" futhi "kuvinjelwe". Ku-window esivula by inkinobho emisiwe izonikwa amandla "Vumela Imikhawulo" - ngemva ngokucindezela ke uzocelwa ukuthi ufake ikhodi enamadijithi-4. Lokhu iphasiwedi bazocela njalo wena uqalise isicelo ekhethiwe. Ukuze sithole izinhlelo ukuze kuvikelwe, kubalulekile, ebonakalayo ngokusebenzisa ngezansi okukhulunywe edingekayo ohlwini ezihlongozwayo. Kuyaphawuleka ukuthi ngaphezu kokuvula uhlelo, irekhodi can yokutakula, futhi ufaka noma ukhipha izicelo edivayisini.
More elula ukusebenzisa indlela ukufakwa kwezicelo ethize. Indlela ufake iphasiwedi ku-iPhone isicelo, kuncike ekhethiwe Uhlelo-umvikeli. Nokho, iningi labo abasebenza isimiso kanye nesibekandzaba efanayo. Njengoba isibonelo, kuyasiza ukuqonda ukuthi usethe iphasiwedi kwenye izicelo ethandwa kakhulu - iAppLock, olutholakalayo ngokukhululekile ku-App Store.
Ukuze ufake ikhodi yokuphepha kufanele ugijime wasemuva nezilungiselelo ukuze ukhethe uhlobo ukuvikelwa kanye isicelo kudingeka. Omunye izinzuzo usebenzisa isofthiwe ezengeziwe yikhono ukhethe uhlobo ukuvikelwa: ikhodi sokuqhafaza, i-PIN noma iphasiwedi njalo.
Ngokufunda ukuthi ukubeka iphasiwedi on a ifolda, ungabona ukuthi kungenzeka ukuba futhi usebenzise iPhone njengendlela yokuthola ejwayelekile, futhi ukufaka izinhlelo ezikhethekile. irekhodi yokutakula Okuzenzakalelayo iyiphi ifolda kungaba iyafana isicelo. Engxenyeni "Imikhawulo", e-ezansi kohlu ezihlongozwayo ukufaka isicelo iphasiwedi ethize, kumelwe ukhethe ifolda ezifanele.
Kufanele kuqashelwe ukuthi Kulokhu uzovikela ukufinyelela amafayela kwifolda kuphela uma ufaka ngemenenja ifayela ejwayelekile. Noma yimuphi omunye isicelo ezama ukufinyelela amafayela yangasese ungenza kanjalo ngaphandle kokudala i-PIN enkundleni yokufakwayo.
Njengoba zokusebenza usethe iphasiwedi ku amafolda kunezindawo eziningi izinhlelo ezahlukene. Ngamunye wabo ivumela ngendlela ethile ukuvimba ukufinyelela amafayela ngaphakathi kohlu lwemibhalo. Enye yezindlela ezivamile of Ukuvinjwa kuyinto Ifolda Lock, itholakala mahhala ku-App Store.
Emva kokuqeda i-ukufakwa isicelo ku "Izilungiselelo" imenyu izovela into efanayo, lapho ungakwazi khetha ifolda bese hlobo lwesivikelo. Uhlelo kubuye kwenze irekhodi yokutakula futhi eziningi nezinye izakhi iPhone, kuhlanganise "Izilungiselelo", uhlu loxhumana nabo bese ikhamera.
Ezinye izindlela yokuvikela
Nokho, awudingi ukwazi indlela ufake kwephasiwedi kuhlelo lokusebenza lwe-iPhone noma ifolda ukuvikela idatha yabo siqu. Efuna umane unqabe bangaphandle amanye amafayela noma izinhlelo, ungakwazi uwafihle kwimenyu enkulu noma kwi Imenenja yefayela. Ngakho, nathi singakwethemba ungesabi ukukhohlwa iphasiwedi noma iphethini sokufinyelela idatha sikhathi esibucayi. Ukuvula amafolda ezifihliwe, noma izicelo, ngokwanele ukuze ngiphinde ngibabone e isibonisi imenyu. Ukuze kube lula wanezela, zikhona izinhlelo ezikhethekile ukukwenza ku ngokuchofoza izinkinobho ezimbalwa, kodwa ukusetshenziswa kwabo kuyokwandisa amathuba okuba ukuthi idatha kuyotholakala.
Kuyini 3g imodemu kungcono ukukhetha umsebenzi unomphela?
Ukukhetha gamepad kuhle PC
I-Tablet Texet TM-7043XD: Ukucaciswa, izincazelo kanye nokubuyekeza